प्रेम दिवसको रोचक कथा: के हो भ्यालेनटाईन डे ? किन मनाइन्छ ?
के हो भ्यालेनटाईन डे ? किन मनाइन्छ ?
२ फाल्गुन २०७५, बिहीबार ०२:०७
काठमाडौं — भनिन्छ प्रेममा न त भुगोल हुन्छ न जात नै । प्रेममा कुनै सीमा हँदैन । प्रेम आफैमा सर्वब्यापी हुन्छ । प्रेममा भित्रि भाव स्नेह हुन्छ । प्रेममा सृफ प्रेम हुन्छ । प्रणय दिवस अर्थात ‘भ्यालेनटाइन डे’ फेब्रुअरी १४ मा भ्यालेनटाइन डे मनाइन्छ ।
यो पश्चिमा संस्कृति अर्थात आयतित संस्कृति पनि भन्ने गरेको पाईन्छ । १४ फेब्रुअरी अर्थात प्रेम दिवस । विशेषगरि पश्चिमा देशहरुमा मनाइँदै आएको यो दिवस केही वर्षदेखि नेपालका युवाले पनि विशेष रुपमा मनाउन थालेका छन्। प्रणय दिवस सहजै पचाउन सकिएको अवस्था भने छैन । सहरी युवा बाहेक अन्यले यसलाई विदेशी चाड भएकाले विकृति मात्र ल्याएको धारणा राख्दै आएका पनि पाइएको छ । सायदै नेपालमा पनि भ्यालेनटाइन डे धुमधाम मनाईदै आईरहेको छ । किन मनाईदैछ त भ्यालेनटाईन डे ? यसको शुरुवात कसले गरेका थिए ?
देश र जनताको लागि समर्पित नेता !
विश्मा यस्ता नेताहरु पनि छन् । जसको विचार मात्रै होईन जीबनशैली हेर्यो भने पनि हामीलाई
काठमाडौं – यदि तपाई फुर्सदमा हुनुहुन्छ । अर्थात समय कसरी काटौँ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने
जसलाई अमेरिकाले ६३४ पटकसम्म मार्न खोज्यो !
क्युवेली जनताका आँखामा न्यायका प्रतिक हुन् नेता फिडेल क्यास्ट्रो । सन् १९२६ को अगस्ट १३